Darawalka Radeon Crimson: oo loogu talagalay cayaartoyda Ubuntu | Laga soo bilaabo Linux
nacaybtire | | GNU / Linux, Noticias
Darawalka Radeon Crimson wuxuu noqon doonaa magaca cusboonaysiinta ugu dambeysa ee loogu talagalay Xirmooyinka darawalka AMD garaafyada taasoo noqotay bedelka saxda ah ee Galiye, taas oo si sii kordheysa ugu sii dhowaaneysa hawlgabnimada, gaar ahaan ka dib markii la bilaabay Omega oo loo heli doono nidaamyadeena Ubuntu runtii dhowaan.
Xirmooyinka darawalka ay soo saartay shirkaddan, wixii hadda ka dambeeya waxaa loo aqoonsan doonaa Barnaamijka Radeon; iyo Radeon Software Crimson Edition waa daah furitaankii magacaas cusub.
Si toos ah xafiisyada AMD waxaa la sheegay in waxqabadka in Linux ee ciyaaraha qaar waxaan kordhin doona ilaa 112%. Laakiin yaanan u oggolaan in boqolkiiba intaas ay adkeynayaan sawirka, waxay umuuqan kartaa in qof qalad ku galay xisaabaadka ama inuu qof doonayo inuu qoslo. Laakiin waxaan u maleynayaa dhanka kale, in aynaan dhibaato weyn ku qabin kalsoonida erayga AMD, waxay muujiyeen in markii ay u dhaqaaqayaan ay maareeyaan in ay qabtaan waxyaabo aad u xiiso badan oo sifiican lugu gaadhay oo laga yaabo inay taasi tahay sababta caqli gal noqon meyso haddii loo maleeyo in xogtu sax tahay.
Dhibicdu waa in loo tixgeliyo waxqabadka "caadiga ah" waxqabadka koontaroolayaasha inta badan way ka yar yihiin. Guud ahaan marka laga hadlayo, gamer caadi ah oo la kulma waxqabad u dhexeeya 10% ilaa 15% wuxuu u tixgelin doonaa inay tahay wax weyn oo u qalma in la aqoonsado; laakiin taasi 112% (oo mararka qaar ka sii badnaan karta) waa xog la yaab leh oo AMD gelin karta a meel mudnaan leh ka mid ah kooxaha waaweyn ee garaafyada sida NVIDIA, ugu yaraan gudaha Linux.
Wax qarsoon maahan in AMD ma laha xiriirka ugu fiican ee Linux dabcan Ubuntu kama baxsato. Waa maxay taageerada darawallada AMD ay aad u liitaan sidoo kalena ay yar yihiin oo darawalada cusubi ay gaaraan is-dhex-dhexaadyo la yaab leh, marka lagu daro in qaar ka mid ah horumariyeyaasha cayaaraha ay doorbidaan in ay sii daayaan cayaaraha iyaga oo aan taageerin kaararka AMD.
Dhibic ka mid ah dhaleeceynta AMD ay la kulantay intii lagu jiray sanadkan 2015 waxay ahayd tirada xaddidan ee sii deynta darawalka WHQL ee la xaqiijiyay. AMD waxay ka shaqeyneysay tiro badan oo ah noocyada beta inta lagu gudajiray sanadkan 2015 (ilaalinta celcelis ahaan ugu yaraan hal sii deyn bishiiba, marka laga soo tago kiiska ay shirkaddu u dhigtay jadwalka sii deynta bil kasta tan iyo 2012) hase yeeshe, waxay ku guuleysteen kaliya 3 sii deynta WHQL shahaadooyinka.
Shahaadada WHQL wax kale kama badna xakamaynta tayada kale, laakiin waxay naga ilaalinaysaa waxa soo kordha ee la xiriira cayayaanka cayaaraha gaar ah, kuwaas oo ah khaladaadka inta badan ku lug yeelan doona, hase yeeshe AMD waxay diirada saari doontaa xalinta waxan oo dhan oo ku saabsan sii deynta shahaadada WHQL ee sanadkan 2016.
Hadda, muxuu AMD mar kale na soo celiyaa?
Kaliya maahan bedelida magaca iyo muuqaalka iyo in la isku dayo in lagu soo koobo waxa himilada AMD eray ahaan, xasiloonida waxay noqon laheyd jawaabta. Shirkadda aaminka ah ee sameysay tijaabooyinka otomaatiga laba jeer waqtiga 25% kiisaska. Oo isna wuxuu sheeganayaa inuu isku dayay Darawalka Crimson in ka badan 15% qaabeynta, oo ay ku jiraan illaa "tiknoolajiyaddii ugu dambeysay."
Darawalka cusub ee Radeon Crimson Driver waa la heli karaa, laakiin halkaan waad awoodaa download wax kasta oo aad ugu baahan tahay linux. Waxa ugu fiican ayaa ah in horumariyeyaasha Radeon Technologies Group aysan meesha ka saarin wax madal ah sidaa darteed waxaan rajeyneynaa in Ubuntu aan la iloobi doonin.
Kawaran haddii aynaan sii deynin waa tirooyinkan lagu soo dhex daadiyay VideoCardz, oo leh Radeon Crimson Driver, ciyaaraha sida Bioshock Infinite kordhin doonaa waxqabadka aad by 112%, DOTA 2 en 113% o Total War maxaan ku sameyn lahaa 115%, iyo sidoo kale Portal 2. Kuwani waa uun cinwaannada qaar laakiin qaar ka mid ah kuwa ugu caansan uguna adeegaya AMD si ay u muujiyaan guulihii ugu dambeeyay.
Waqtigan xaadirka ah waxaan sugi karnaa oo keliya bilowga rasmiga ah ee kantaroolaha si aan wax badan uga ogaano waxa ay na soo gaarsiin doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Darawalka Radeon Crimson: oo loogu talagalay cayaartoyda Ubuntu
AMD waxay garaneysaa sida madax xanuunka loo siiyo darawalkeeda Radeon, waxaan hayaa laptop oo la iloobey todobaadyo iyadoo lagu rakibey qalab cusub oo Arch ah maxaa yeelay ma isticmaali karo wadayaasha. Intel dhibaato kuma qabin dhibaatadaas (inkasta oo aanan ka filayn intel isku dhafan), ma haysto Nvidia sidaa darteed waan ka gaabsan doonaa faallooyinka.
Maaha in xarigga la dhigo laakiin waxqabadka 112% waxay u dhigantaa koror 12% ah.
Black Shabakadaha Raiola Networks 27-11 ilaa 02-12